Masuul iska casilay wasaarada gargaarka Soomaaliya. – The Voice of Northeastern Kenya
Masuul iska casilay wasaarada gargaarka Soomaaliya.
Maxamed Cumar Macalin oo ahaa Xoghayihii joogtada ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay Wasaaradaasi.
Warqada uu Xoghayaha soo saaray ayuu ku sheegay inuu isku casilay duruufo jira oo u saamixi waayey inuu sii wato shaqadii uu u hayey wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta musiibooyinka ee dowlada Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu sheeegay inay kala aragti duwanaansho u dhaxaysay isaga iyo Wasiirka Wasaaraddaasi islamarkaana uusan ku qancin qaabka shaqada loo wado.
Warar kale ayaa sheegaya in is casilaada masuulkaan ay la xiriirto kiis dhawaan ka dhacay isla wasaaradda gargaarka oo lagu xiray Daahir Maxamed Nuur oo isna ahaa Agaasimihii Waaxda Dib u Dejinta Barakacayaasha oo haatan ku jira xabsi, kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku eedaysay xatooyo xoolo dadweyne.
Arintaan ayaana imaanaysa ayadoo kal hore Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu amray in Wasiir uusan shaqo joojin ku sameyn karin Xoghayaha joogtada Wasaaradda, isaga oo aan ka talo gelin Madaxda xukuumadda.
← Dowlad goboleedka Garissa oo 11 milyan ka heshay bangiga adduunka
Dowlada Soomaaliya oo sharaxday mowqifkeeda Khilaafka Sucuudiga iyo Canada. →